Xubno ka socda daladaha haweenka Puntland tababar uga furmay Garowe – SBC
Xubno ka socda daladaha haweenka Puntland tababar uga furmay Garowe
Aqoon iswaydaarsigan oo socondoona mudo afar cisho ah waxaa ka qayb galaya xubo ka socda daladaha Haweenka ee Puntland oo kala yimi 12degmo oo ka tirsan deegaanada Puntland, Waxaana ay kawada hadli doonan mudada afarta cisho ee ay joogaan Garoowe habka ugu haboon oo Haweenka Puntland uga qayb qaadan karaan arimaha bulshada iyo siyaasada.
Maxamed Nuur Maxamuud oo ka tirsan hay’ada ndi iyadu maalgalinaysay tababarka ayaa kawaramaya muhiimada tababarka iyo hayada ndi waxa ay ka shaqayso.
Agaasimaha wasaarada Haweenka iyo arimaha qoyska Puntland C.Qaadir Yuusuf Nuur hadal ka jeediyey furitaankii aqoon iswaydaarsiga ayaa sheegay in muhiimada ugu wayn wasaarada Haweenka ay tahay hor mariso arimaha Haweenka.
Wasiir ku xigeen wasaarada Haweenka maymuun cabdi ducaale si rasmi ah u furtay tababarkii maanta aya sheegtay in Haweenku ay cudud xoogan kuleeyihiin hayada dowlada iyo arimaha bulshada waxaana ay ku boorisay xubnihii ka socday ururada Haweenka ee degmooyinka Puntland ay ka faaidaystaan aqoon iswaydaarsigan.
Dhanka kale wasiiradu waxay ka hadashay in food ku soo hayso sideeda maarso oo ah maalinta Haweenka oo ay sheegtay in wasaarada Haweenku ay diyaar garow xoogan ugu jirto Marka uu dhamaado shirkan mudo afarta cisho ah socnayaa waxaa lagu wadaa in xubnaha ka qayb gallay ay dib ugu laabtaan degooyinkii ay ka yimaadan isla markaan ay ka bilaabaan tababaro ay u furayaan ururada Haweenka ay ka socdaan.
waaw mansha,allah ilaahay si nabada haydinku soo dhamaado